အချိန်နည်းနည်းလေးအတွင်းမှာ အင်္ဂလိပ်စာကို ဘယ်လို သင်ယူမလဲ - Myanmar Network
အချိန်နည်းနည်းလေးအတွင်းမှာ အင်္ဂလိပ်စာကို ဘယ်လို သင်ယူမလဲ
Posted by Language Republic on August 24, 2015 at 11:17 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
သင့်ရဲ့ နောက်အင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာက ဒီနေ့နေ့လယ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ သင်ဟာ စာအုပ်ကိုရက်ပေါင်း များစွာသယ်ပြီး သွားလာနေသော်လည်း ယခုအထိ စာအုပ်ကို မဖွင့်ရသေးပါ။ သဒ္ဒါလေ့ကျင့်ခန်း အချို့ လုပ်ရန်ရှိတဲ့ အပြင် ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုလည်း ဖတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အခက်တော့ တွေ့ပြီပေါ့။
သင့်အနေဖြင့် ဝေါဟာရတွေကို နောက်တစ်ကြိမ် မမှတ်မိပြန်ဘူး။ ပြီးတော့ ဒီသင်ခန်းစာတွေအတွက် အခကြေးငွေလည်းပေးထားရတယ်။ အနည်းဆုံးတော့ သင့်အနေဖြင့် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသင့် တာပေါ့။ အပြစ်ရှိတယ်လို့ သင်ခံစားရတယ်။ ပြီးတော့ နောက်တစ်ပတ် အလုပ်ခွင်မှာ တင်ပြရမည့် အင်္ဂလိပ်စာ အကြောင်းကို စဉ်းစားပြန်တော့လည်း ကြောက်စိတ်ဝင်မိတယ်။ ဒါပေမဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့က မိသားစုထံကို သွားလည်ရသလို လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ထံလည်း သွားလည်ရသေးတယ်။ ထို့အပြင် တိုက်ခန်းကိုလည်း သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရတယ်။ ဒါက တစ်ပတ်တစ်ပတ် ဒီအတိုင်းပါပဲ။ လုပ်ရမဲ့ အလုပ်တွေရဲ့ စာရင်းက အမြဲတမ်းပဲ ရှည်လျားလှပါတယ်။ ဘယ်လိုလုပ် အင်္ဂလိပ်စာကို ကျက်နိုင်မှာလဲ? ဒီလိုဆို ဘာလုပ်ရပါ့မလဲ။
ဒီအခြေအနေက သင်နဲ့ရင်းနှီးပြီးသား အခြေအနေပါလား။ ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အကြောင်းမှာ ဘာသာစကား သင်ယူသူအများစုအတွက် ဒီအတိုင်းပဲဖြစ်နေလို့လေ။ သင်က ခြွင်းချက်မဖြစ်နိုင်ပါ။
အင်္ဂလိပ်စာတိုးတက်ရန်နှင့် သင်ယူနိုင်ရန် အဓိကကျသော အခြေခံအကြောင်းနှစ်ရပ်ရှိပါတယ်။ ပထမအကြောင်းကတော့ စိတ်ဓာတ်လှုံ့ဆောင်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းစဉ်အပေါ် အားစိုက်ရန် စိတ်ပါ ၀င်စားမှုမရှိသည့်အပြင် ဘာသာစကားရဲ့ စွမ်းရည်များကြောင့် ဘယ်လို အကျိုးတွေ ရရှိနိုင်တယ်ဆို တာကို မခံစားတတ်ရင် သင့်ပန်းတိုင်ကို ရောက်ရှိနိုင်မှာ မဟုတ်ပါ။ အရှုံးပေးခြင်း (သို့) အချိန်အကြာ ကြီး အနားယူခြင်းတို့သည် ရေရှည်အတွက် ကောင်းသော ဖြေရှင်းနည်း မဟုတ် သော်လည်း အမြဲပဲ လွယ်ကူသော ဖြေရှင်းနည်းဖြစ်နေပါတယ်။ ထို့ကြောင့် ၄င်းနည်းကို မေ့လိုက်ပါ။ နောက်အခြေခံ အကြောင်းကတော့ အချိန်ပါပဲ။ လူအနည်းစုမှာပဲ လုံလောက်တဲ့အချိန်ဆိုတာ ရှိပါတယ်။ ထို့ကြောင့် သင့်မှာရှိတဲ့ ကန့်သတ်ချိန်အတွင်းမှာ အများဆုံး ဘယ်လို ဖျစ်ညှစ်ပြီး ထိုးသိပ်သွင်းလို့ရနိုင်မလဲဆိုတာ ကို ကြည့်ကြရအောင်။
အောက်မှာ ဖော်ပြထားတာကတော့ လက်တွေ့အသုံးကျသော အကြံဉာဏ်များနှင့် အကြံပြုချက်တစ်ချို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ချက်ချင်း လုပ်စရာရှိတာကို လုပ်ပါ။ ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ ပြောလိုတာက နောင်မှာ အချိန်တွေ ပိုရလိမ့်မယ်လို့ မမျှော်လင့်ပါနှင့်။ ဘယ်တော့မှ မဖြစ်ပါ။ သင့်အနေနှင့် ဘယ်တော့မှ အချိန်ပိုရလာမှာ မဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့် သင်ခန်းစာ၊ သင်တန်းတို့ကို ရွှေ့ဆိုင်းခြင်းမပြုပါ နှင့်။
အဆက်မပြတ်ခြင်းသည် ပဓာနကျပါသည်။ အားလပ်ချိန်မယူပါနှင့်။ အကြောင်းအရာအများကြီးကို မေ့နေပြီးနောက် ပြန်လည်စတင်ဖို့ဆိုတာ သင့်အတွက် ခက်ခဲပါလိမ့်မည်။
ဘာသာစကားကို နေ့စဉ် ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပါ။ အချိန်တစ်နာရီ၊ နာရီဝက် ဒါမှမဟုတ် ဆယ်မိနစ်ပဲပေးပါ။ တစ်ပတ်လုံးမှာ တစ်ရက်ထက်တော့ အများကြီး ပိုကောင်းပါတယ်။ နေ့စဉ် ဘာသာစကားနဲ့ ထိတွေ့နေခြင်းသည် အရေးကြီးပါတယ်။
နေ့စဉ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်လုပ်ငန်းတွေထဲကို အင်္ဂလိပ်စာကို သီးခြားခွဲထုတ်လို့မရအောင် ပေါင်းစပ်ပေးပါ။ ယခုခေတ်မှာ နည်းပညာက များစွာ အထောက်အကူပြုပါတယ်။ သင်နှင့်အတူ သယ်ဆောင်လေ့ရှိ သော လက်ကိုင်ဖုန်း (သို့) တခြားသော ကိရိယာထဲမှာ နားထောင်စရာအကြောင်းအရာများထည့်သွင်း ထားပါ။ ခရီးသွားနေစဉ် နားထောင်ပါ။ ဘတ်(စ)ကားပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကားပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။ အများကြီးအထောက်အကူရစေပါတယ်။ သင်ကြားတဲ့ ၀ါကျတွေကို ပြန်ဆိုကြည့်ပါ။ ၄င်းတို့သည် သင့်စိတ်ထဲမှာ စွဲကျန်နေသောကြောင့် နောင် စကားပြောသောအခါ အလွယ်တကူ အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အလွန်ကောင်းသော အဘိဓာန်များရှိသကဲ့သို့ smart phone တွေအတွက် တခြားသော လုပ်ငန်းသုံး ပရိုဂရမ်တွေ (applications)တွေလည်း ရှိပါတယ်။ အလုပ်သွားအလုပ်ပြန်တဲ့အခါမှာလည်း ဝေါဟာရ များကို ကျက်မှတ်ပါ။ တစ်နေ့လျှင် စကားလုံး (၁၀)လုံး (သို့) (၁၀)လုံးထက်ပို၍ ကျက်ပါ။
ပြန်လှန်လေ့ကျင့်ရန်လည်း မမေ့ပါနှင့်။ လူအများစုသည် စာအုပ်တစ်အုပ်ကို မြန်နိုင်သမျှ မြန်မြန်ပြီးရန် ၄င်းတို့၏ စာကျက်မှတ်ခြင်းနှင့် ရည်ရွယ်ချက်ပေါက်မြောက်ခြင်းတို့ကို အလောတကြီးလုပ်လိုကြသည်။ သို့သော်လည်း သူတို့သည် အကြောင်းအရာများကို မသိကြပါ။ ၄င်းအစား အလျင်စလို မလုပ်ပါနှင့်။ ပြန်လှန်လေ့ကျင့်ပါ။ ပုံမှန်ပြန်လှန်လေ့ကျင့်မှုသည် လုံးဝကို လိုအပ်ပါတယ်။
သတင်းတွေကို အင်္ဂလိပ်လိုဖတ်ပါ။ ဘာကြောင့် ကိုယ့်ဘာသာစကားနဲ့ ဖတ်မှာလဲ?။ အကျိုးမရှိပါ။ အင်္ဂလိပ်စာကို ဖတ်နိုင်မဲ့ အဖိုးတန်အချိန်တွေ ဆုံးရှုံးသွားတာပဲ ရှိပါတယ်။ သင့်အကြိုက်ဆုံးစာအုပ်များနှင့် မဂ္ဂဇင်းများကို အင်္ဂလိပ်လိုပဲ ဖတ်ပါ။
အင်္ဂလိပ်စကားကို ရုံးသုံးဘာသာစကားအဖြစ် အသုံးပြုသော ကုမ္ပဏီတစ်ခု၌ အလုပ်ဝင်လုပ်ပါ။ စစချင်းတော့ ကြောက်စရာကောင်းပါတယ်။ ရေရှည်ကျတော့ တကယ့်ကို အကျိုးရှိပါတယ်။
e-mail တွေကို အင်္ဂလိပ်လိုပဲ ရေးပါ။ သူငယ်ချင်းတွေထံ စာရေးတဲ့အခါ အင်္ဂလိပ်လိုပဲ ရေးပါ။ ပိုပျော်စရာ ကောင်းသလို လေ့ကျင့်မှုလည်း ကောင်းကောင်းရပါတယ်။
သင်ဘာပဲလုပ်လုပ် အဓိကကတော့ မှန်မှန်လုပ်သွားဖို့ပါပဲ။ တတ်နိုင်ပါက နေ့တိုင်းလုပ်ပါ။ ဒီလိုနည်းဖြင့် အင်္ဂလိပ်စာက သင့်ဘ၀ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ သင်လိုချင်တာကလည်း ဒါပဲ မဟုတ်ပါ လား။
Anastasia Koltai ၏ How to Learn English if You Have Very Little Time? ကိုဘာသာပြန်ဆိုထားခြင်းဖြစ်သည်။ မူရင်းဆောင်းပါးကို ဤနေရာတွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
သငျ့ရဲ့ နောကျအင်ျဂလိပျစာသငျခနျးစာက ဒီနနေ့လေ့ယျမှာဖွဈပါတယျ။ သငျဟာ စာအုပျကိုရကျပေါငျး မြားစှာသယျပွီး သှားလာနသေျောလညျး ယခုအထိ စာအုပျကို မဖှငျ့ရသေးပါ။ သဒ်ဒါလကေ့ငျြ့ခနျး အခြို့ လုပျရနျရှိတဲ့ အပွငျ ဆောငျးပါးတဈပုဒျကိုလညျး ဖတျရမှာဖွဈပါတယျ။ အခကျတော့ တှပွေီ့ပေါ့။
သငျ့အနဖွေငျ့ ဝေါဟာရတှကေို နောကျတဈကွိမျ မမှတျမိပွနျဘူး။ ပွီးတော့ ဒီသငျခနျးစာတှအေတှကျ အခကွေးငှလေညျးပေးထားရတယျ။ အနညျးဆုံးတော့ သငျ့အနဖွေငျ့ ကွိုတငျပွငျဆငျထားသငျ့ တာပေါ့။ အပွဈရှိတယျလို့ သငျခံစားရတယျ။ ပွီးတော့ နောကျတဈပတျ အလုပျခှငျမှာ တငျပွရမညျ့ အင်ျဂလိပျစာ အကွောငျးကို စဉျးစားပွနျတော့လညျး ကွောကျစိတျဝငျမိတယျ။ ဒါပမေဲ့ တနင်ျဂနှနေကေ့ မိသားစုထံကို သှားလညျရသလို လုပျဖျောကိုငျဖကျထံလညျး သှားလညျရသေးတယျ။ ထို့အပွငျ တိုကျခနျးကိုလညျး သနျ့ရှငျးရေးလုပျရတယျ။ ဒါက တဈပတျတဈပတျ ဒီအတိုငျးပါပဲ။ လုပျရမဲ့ အလုပျတှရေဲ့ စာရငျးက အမွဲတမျးပဲ ရှညျလြားလှပါတယျ။ ဘယျလိုလုပျ အင်ျဂလိပျစာကို ကကျြနိုငျမှာလဲ? ဒီလိုဆို ဘာလုပျရပါ့မလဲ။
ဒီအခွအေနကေ သငျနဲ့ရငျးနှီးပွီးသား အခွအေနပေါလား။ ဖွဈကောငျး ဖွဈနိုငျပါတယျ။ အကွောငျးမှာ ဘာသာစကား သငျယူသူအမြားစုအတှကျ ဒီအတိုငျးပဲဖွဈနလေို့လေ။ သငျက ခွှငျးခကျြမဖွဈနိုငျပါ။
အင်ျဂလိပျစာတိုးတကျရနျနှငျ့ သငျယူနိုငျရနျ အဓိကကသြော အခွခေံအကွောငျးနှဈရပျရှိပါတယျ။ ပထမအကွောငျးကတော့ စိတျဓာတျလှုံ့ဆောငျမှုပဲဖွဈပါတယျ။ လုပျငနျးစဉျအပျေါ အားစိုကျရနျ စိတျပါ ၀ငျစားမှုမရှိသညျ့အပွငျ ဘာသာစကားရဲ့ စှမျးရညျမြားကွောငျ့ ဘယျလို အကြိုးတှေ ရရှိနိုငျတယျဆို တာကို မခံစားတတျရငျ သငျ့ပနျးတိုငျကို ရောကျရှိနိုငျမှာ မဟုတျပါ။ အရှုံးပေးခွငျး (သို့) အခြိနျအကွာ ကွီး အနားယူခွငျးတို့သညျ ရရှေညျအတှကျ ကောငျးသော ဖွရှေငျးနညျး မဟုတျ သျောလညျး အမွဲပဲ လှယျကူသော ဖွရှေငျးနညျးဖွဈနပေါတယျ။ ထို့ကွောငျ့ ၄ငျးနညျးကို မလေို့ကျပါ။ နောကျအခွခေံ အကွောငျးကတော့ အခြိနျပါပဲ။ လူအနညျးစုမှာပဲ လုံလောကျတဲ့အခြိနျဆိုတာ ရှိပါတယျ။ ထို့ကွောငျ့ သငျ့မှာရှိတဲ့ ကနျ့သတျခြိနျအတှငျးမှာ အမြားဆုံး ဘယျလို ဖဈြညှဈပွီး ထိုးသိပျသှငျးလို့ရနိုငျမလဲဆိုတာ ကို ကွညျ့ကွရအောငျ။
အောကျမှာ ဖျောပွထားတာကတော့ လကျတှအေ့သုံးကသြော အကွံဉာဏျမြားနှငျ့ အကွံပွုခကျြတဈခြို့ ဖွဈပါတယျ။
ခကျြခငျြး လုပျစရာရှိတာကို လုပျပါ။ ပထမဦးဆုံးအနနေဲ့ ပွောလိုတာက နောငျမှာ အခြိနျတှေ ပိုရလိမျ့မယျလို့ မမြှျောလငျ့ပါနှငျ့။ ဘယျတော့မှ မဖွဈပါ။ သငျ့အနနှေငျ့ ဘယျတော့မှ အခြိနျပိုရလာမှာ မဟုတျပါ။ ထို့ကွောငျ့ သငျခနျးစာ၊ သငျတနျးတို့ကို ရှဆေို့ငျးခွငျးမပွုပါ နှငျ့။
အဆကျမပွတျခွငျးသညျ ပဓာနကပြါသညျ။ အားလပျခြိနျမယူပါနှငျ့။ အကွောငျးအရာအမြားကွီးကို မနေ့ပွေီးနောကျ ပွနျလညျစတငျဖို့ဆိုတာ သငျ့အတှကျ ခကျခဲပါလိမျ့မညျ။
ဘာသာစကားကို နစေ့ဉျ ကိုငျတှယျဖွရှေငျးပါ။ အခြိနျတဈနာရီ၊ နာရီဝကျ ဒါမှမဟုတျ ဆယျမိနဈပဲပေးပါ။ တဈပတျလုံးမှာ တဈရကျထကျတော့ အမြားကွီး ပိုကောငျးပါတယျ။ နစေ့ဉျ ဘာသာစကားနဲ့ ထိတှနေ့ခွေငျးသညျ အရေးကွီးပါတယျ။
နစေ့ဉျလုပျရိုးလုပျစဉျလုပျငနျးတှထေဲကို အင်ျဂလိပျစာကို သီးခွားခှဲထုတျလို့မရအောငျ ပေါငျးစပျပေးပါ။ ယခုခတျေမှာ နညျးပညာက မြားစှာ အထောကျအကူပွုပါတယျ။ သငျနှငျ့အတူ သယျဆောငျလရှေိ့ သော လကျကိုငျဖုနျး (သို့) တခွားသော ကိရိယာထဲမှာ နားထောငျစရာအကွောငျးအရာမြားထညျ့သှငျး ထားပါ။ ခရီးသှားနစေဉျ နားထောငျပါ။ ဘတျ(စ)ကားပျေါမှာပဲဖွဈဖွဈ၊ ကားပျေါမှာပဲဖွဈဖွဈပေါ့။ အမြားကွီးအထောကျအကူရစပေါတယျ။ သငျကွားတဲ့ ဝါကတြှကေို ပွနျဆိုကွညျ့ပါ။ ၄ငျးတို့သညျ သငျ့စိတျထဲမှာ စှဲကနျြနသေောကွောငျ့ နောငျ စကားပွောသောအခါ အလှယျတကူ အသုံးပွုနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။
အလှနျကောငျးသော အဘိဓာနျမြားရှိသကဲ့သို့ smart phone တှအေတှကျ တခွားသော လုပျငနျးသုံး ပရိုဂရမျတှေ (applications)တှလေညျး ရှိပါတယျ။ အလုပျသှားအလုပျပွနျတဲ့အခါမှာလညျး ဝေါဟာရ မြားကို ကကျြမှတျပါ။ တဈနလြေှ့ငျ စကားလုံး (၁၀)လုံး (သို့) (၁၀)လုံးထကျပို၍ ကကျြပါ။
ပွနျလှနျလကေ့ငျြ့ရနျလညျး မမပေ့ါနှငျ့။ လူအမြားစုသညျ စာအုပျတဈအုပျကို မွနျနိုငျသမြှ မွနျမွနျပွီးရနျ ၄ငျးတို့၏ စာကကျြမှတျခွငျးနှငျ့ ရညျရှယျခကျြပေါကျမွောကျခွငျးတို့ကို အလောတကွီးလုပျလိုကွသညျ။ သို့သျောလညျး သူတို့သညျ အကွောငျးအရာမြားကို မသိကွပါ။ ၄ငျးအစား အလငျြစလို မလုပျပါနှငျ့။ ပွနျလှနျလကေ့ငျြ့ပါ။ ပုံမှနျပွနျလှနျလကေ့ငျြ့မှုသညျ လုံးဝကို လိုအပျပါတယျ။
သတငျးတှကေို အင်ျဂလိပျလိုဖတျပါ။ ဘာကွောငျ့ ကိုယျ့ဘာသာစကားနဲ့ ဖတျမှာလဲ?။ အကြိုးမရှိပါ။ အင်ျဂလိပျစာကို ဖတျနိုငျမဲ့ အဖိုးတနျအခြိနျတှေ ဆုံးရှုံးသှားတာပဲ ရှိပါတယျ။ သငျ့အကွိုကျဆုံးစာအုပျမြားနှငျ့ မဂ်ဂဇငျးမြားကို အင်ျဂလိပျလိုပဲ ဖတျပါ။
အင်ျဂလိပျစကားကို ရုံးသုံးဘာသာစကားအဖွဈ အသုံးပွုသော ကုမ်ပဏီတဈခု၌ အလုပျဝငျလုပျပါ။ စစခငျြးတော့ ကွောကျစရာကောငျးပါတယျ။ ရရှေညျကတြော့ တကယျ့ကို အကြိုးရှိပါတယျ။
e-mail တှကေို အင်ျဂလိပျလိုပဲ ရေးပါ။ သူငယျခငျြးတှထေံ စာရေးတဲ့အခါ အင်ျဂလိပျလိုပဲ ရေးပါ။ ပိုပြျောစရာ ကောငျးသလို လကေ့ငျြ့မှုလညျး ကောငျးကောငျးရပါတယျ။
သငျဘာပဲလုပျလုပျ အဓိကကတော့ မှနျမှနျလုပျသှားဖို့ပါပဲ။ တတျနိုငျပါက နတေို့ငျးလုပျပါ။ ဒီလိုနညျးဖွငျ့ အင်ျဂလိပျစာက သငျ့ဘ၀ရဲ့ အစိတျအပိုငျးဖွဈလာမှာဖွဈပါတယျ။ သငျလိုခငျြတာကလညျး ဒါပဲ မဟုတျပါ လား။
Anastasia Koltai ၏ How to Learn English if You Have Very Little Time? ကိုဘာသာပွနျဆိုထားခွငျးဖွဈသညျ။ မူရငျးဆောငျးပါးကို ဤနရောတှငျ ဖတျရှုနိုငျပါသညျ။
Permalink Reply by Khin Myo Aey on August 24, 2015 at 12:44
Thank you so much. Very deeply thanks. I must do like that starting for the time being.
Permalink Reply by Aung Zaw Myo on August 24, 2015 at 12:49
Permalink Reply by winthuyahtut on August 24, 2015 at 13:57
Permalink Reply by Phyo Ei Hlaing on August 24, 2015 at 14:48
Yes, I agree your post!!! I'd to improve my English in4skills so I do follow what you say. Thanks and hope more tips for all studious learners.
Permalink Reply by zaw myo aung on August 24, 2015 at 15:06
Permalink Reply by မင်း မင်း on August 24, 2015 at 15:09
Permalink Reply by Nang Aye Aye Maw on August 24, 2015 at 15:53
Permalink Reply by Naing Lin Aung on August 24, 2015 at 16:08
Thanks for your help to improve our skill
Permalink Reply by aungnaingthu on August 24, 2015 at 18:05
Permalink Reply by Kham Monm on August 25, 2015 at 9:50
Permalink Reply by Thuzar on August 25, 2015 at 11:10
Thank alot for you are advice.
Permalink Reply by kyawzayhtet on August 25, 2015 at 11:36